Delete Photos / Album ka iPad / iPad mini
Sida loo Delete Photos / Album ka iPad / iPad mini / iPhone
Ha ogaadaan sida ay u tirtirto sawiro ka iPad / iPad mini / iPhone? Taasi waa arrin ma aha oo kaliya in aad laakiin dad badan oo dhibaya. Waxaan arkay waxaa jira posts badan ee discussions.apple.com hadlayaan oo ku saabsan sida loo tirtiri sawiro ka iPad / iPad mini / iPhone. Dadka qaarkood waxay leeyihiin ma jirto trashcan in ay tirtirto sawir. Qaar waxay yidhaahdaan in badhanka tirtirto yahay boor ama casaan, oo uma oggolaanin isticmaala inay sawiro ka mini iPad / iPad / iPhone saarto. Dhab ahaantii, waxaa jira siyaabo dhowr ah si ay u tirtirto sawiro ka iPad / iPad mini / iPhone. Waxaad fiirin kartaa siyaabaha soo socda si ay u gaarto goolkii.
Delete sawiro la Wondershare TunesGo (software desktop)
Delete sawiro la Lugood
Delete sawiro la cable USB ah
Delete mini iPad / iPad / iPhone photos qabtay
Delete Lugood sawiro laga keeno ka iPad / iPad mini / iPhone
Delete sawiro ka Photo Stream ee iPad / iPad mini / iPhone
Delete albums Photo ka iPad / iPad mini / iPhone
Wondershare TunesGo waa xal dhan-in-mid u ogolaanaya in aad tirtirto wixii sawiro aan la rabin in iPad / iPad mini / iPhone Camera Roll (iPad photos qabtay), iPad Photo Library (laga keeno ka Lugood), oo Photo Stream. Oo waxaa sidoo kale awood u isticmaala in ay tirtirto farabadan ee photos mar kasta. Si kastaba, si ay u tirtirto sawiro ka iPad si fudud oo si habsami leh, Wondershare TunesGo waa doorashada ugu fiican ee aad.
Xalka 1: All-in-mid Xalka in ay tirtirto Photos Meel ka iPad / iPad mini / iPhone
Delete Photos ee iPad Camera Roll, Photo Library iyo Photo Stream;
Ka qaad sawir albums ka iPad aan ku xirid ah;
Photos kaabta ka iPad in computer ama drive dibadda adag;
Samee sawirada cusub iyo sawiro dejinta kombiyuutar si ay iPad;
Download TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) oo ku xidh on your computer. Isticmaal cable USB in ay ku xidhmaan aad iPad la your computer iyo abuurtaan TunesGo Wondershare. Waxaa lagu ogaadaa doonaa iPad iyo muujiyaan iPad ee ay suuqa kala weyn.
Tallaabada 2. photos Delete ka iPad / iPad mini / iPhone
Guji ee "Sawirro" tab galeeysid bidix. Tani waxay kor u soo Bixiyaa wax uu furmo suuqa maamulka sawirka. Markaas waa in aad ku dhufo "Roll Camera", "Photo Library", ama "Photo Stream" in la furo sawir dhiganta gallery ah. Dooro photos aan loo baahnayn oo guji "Delete". Waxa kaliya ee aad qaadataa labaad dhawr in ay sawiro ka saar ka iPad. Si aad u tirtirto album sawir ah ka iPad, xaq-guji album sawirka guji "Delete". Waa maxay sababta aan kala soo bixi Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) si ay xaq u leedahay hadda isku day?
Xalka 2: Gacanta baab'iyo sawiradiisii ​​ka iPad / iPad mini / iPhone
Xalka 2-1: Gacanta baab'iyo sawiradiisii ​​qabtay iyo sawiro ku Photo Stream ka iPad / iPad mini / iPhone
Users si toos ah u tirtiri kartaa sawiro on iPad / iPad mini / iPhone ee gacanta. Si kastaba ha ahaatee, sawiro la gacanta tirtiri karaa oo kaliya, kuwaas oo aad qaaday aad iPad iyo kuwan aad Photo Stream. Halkan waxa ku jira tilaabooyin looga saaraayo iPad qabtay photos iyo sawiro ku Photo Stream.
Tallaabada 1. Tubada Photos app on your iPad.
Tallaabada 2. Photos tuubada ama Photo Stream isha ugu sareysa ee suuqa.
Tallaabada 3. Tubada image aad rabto in aad tirtirto oo qasabadda "Delete" ama "qashinka karaa" 'icon.
Xalka 2-1, ka iPad / iPad mini / iPhone Delete sawiro gacanta
Milkiilayaasha iPad si toos ah u tirtiri kartaa sawiro ka qalab. Xal Tani tirtirto doonaa oo kaliya sawirada la soo qabtay iyadoo la isticmaalayo qalab aad, sidaas waxaa jira sidoo kale in aad 'Roll Camera' folder ama in aad 'Photo Stream'. Hoos waxaa ku talaabada ay xal talaabo si ay u tirtirto sawiro ka yimid 'Roll Camera' iyo 'Photo Stream'
Tallaabada 1. Daahfurka app Photos on your iPad ah
Dooro folder photos halkaas oo sawiro aad rabto in aad tirtirto ku yihiin, ha ahaato 'Roll Camera' ama 'Photo Stream'
Tallaabada 2. Dooro sawirka aad rabto in aad tirtirto
Tubada badhanka la doortay si ay u ogolaanaya in aad si loo doorto in ka badan hal sawir, Bal eeg, waayo, sawirrada aad dooneyso in aad tirtirto.
Tallaabada 3. tuubada "Delete '
Xalka 3: Delete oo dhan Lugood sawiro laga keeno ka iPad / iPad mini / iPhone la Lugood
Dadka qaar ayaa sheegay in sawiro synced badan la Lugood (ama Lugood laga keeno) la tirtiro can'te on iPad. Taas ayaana runta ah. Ma jirto doorasho ku iPad u ogolaanaya in ay tirtirto noocan oo kale ah sawiro. Si aad u tirtirto sawiradan, in aad sidoo kale isku daydaa inaad xal 1 ama via Lugood aad on your computer. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka in ay tirtirto oo dhan Lugood sawiro laga keeno ka iPad la Lugood ah.
Tallaabada 1. Isku aad iPad la your computer via cable USB ah oo aan bilowno Lugood.
Tallaabada 2. Riix si aad iPad iyo waxaad ka arki kartaa guddi gacanta u iPad. Waxaa jira tab ah sida "Sawirro" magacaabay. waxa guji.
Tallaabada 3. Sax "Sawirro nidaameed ka" dooro folder madhan on your computer. Guji "codso" si ay u bilaabaan hagaagsan ee.
Xalka 4: Delete sawiro la cable USB ah
Dhab ahaantii, Apple kuu ogolaanaya in aad tirtirto sawiro aad ka computer la iPad si fudud. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa furaysto cable USB in kombiyuutarka ah oo wuxuu galay. Raac tallaabooyinka fudud ee hoose.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad si aad u computer.
Tallaabada 2. computer ayaa lagu ogaan doonaa iPad ka dibna korto aad iPad sida drive ah disk saari karo.
Tallaabada 3. Raadi aad iPad on your computer. Waxaa fur oo guji Gudaha Kaydinta> DCIM. Dhammaan sawiro aad qaadato halkaas badbaadiyey. Dooro photos unwnanted iyo iyaga tirtirto.
> Resource > iPad > Sida loo Delete Photos / Album ka mini iPad / iPad